IMicrosoft yandisa inani lamazwe apho ungathenga khona iNqaku lencwadi | Iindaba zeGajethi
IMicrosoft yandisa inani lamazwe apho ungathenga khona iNcwadi ePhezulu
Kunyaka ophelileyo, abafana baseRedmond baveza into esinokuthi siyithathe njengelaptop yokuqala yenkampani, iNcwadi yoMhlaba, isixhobo esithe sathengiswa ngokudibeneyo kunye nebhodi yezitshixo, ngokungafaniyo neSurface Pro. Esi sixhobo sifumene uphononongo olukhulu isuka kumajelo eendaba kumazwe ambalwa apho ibikhona ukusukela oko yasungulwa, zine kuphela: i-United States, Canada, Australia ne-New Zealand. Ekugqibeleni inkampani ithathe isigqibo ukwandisa inani lamazwe apho uya kuba nakho ukuthenga esi sixhobo, kwaye apho kungekho lizwe lithetha iSpanish, kodwa kubonakala ngathi linyathelo lokuqala ukuze kulo nyaka uzayo ube nokufumaneka.
Kwiiveki ezimbalwa, amazwe asibhozo anokuthengwa kwi-Surface Book aza kuba yi-Austria, China, France, Germany, Hong Kong, Japan, Switzerland kunye ne-United Kingdom. Bonke abahlali bala mazwe Baza kuba nakho ukufumana ezi modeli zintsha zinikiweyo ngaphezulu nje kwinyanga ephelileyo kunye neemodeli ezaziboniswe kunyaka ophelileyo kwaye balivulile udidi kwaye kwezi veki zidlulileyo babone amaxabiso abo ehlisiwe ukulungiselela iimodeli ezintsha. Amaxabiso ngee-euro awafumaneki okwangoku, kodwa kuthathelwa ingqalelo ukungafani kwe-Eurodollar, kusenokwenzeka ukuba amaxabiso aya kunyuswa ngamakhulu ambalwa ee-euro.
Kwiiveki ezimbalwa, IMicrosoft ikwandisile inani lamazwe apho isixhobo seHoloLens esongezwe ngokwenyani sinokuthengwa.. IMicrosoft ijolise kwezi nyanga zokugqibela zonyaka ukwandisa iimarike apho inokuthengisa khona izixhobo ezenziwa yinkampani ngokwayo. Okwangoku, akukho lwazi malunga nokufika okunokwenzeka eYurophu kweSurface Studio, iAIO ekhwankqisayo iMicrosoft eyibonisileyo kunye neemodeli ezintsha zeNcwadi eziNgaphezulu kwaye okwangoku ifumana uphononongo oluqinisekileyo, zombini kuyilo lwayo, ukusebenza kwayo kunye namathuba ayibonisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IMicrosoft yandisa inani lamazwe apho ungathenga khona iNcwadi ePhezulu
Usibhale nini isihloko, emva kokusela ezine kwezo?
I-HDMI 2.1 kunye ne-HDMI Alt Standard yokuSungulwa nge-CES 2017
IXiaomi Mi 5C inokubiza imali engaphantsi kwee-euro ezingama-150 ngaphandle kwetyipo